Ukuguqulwa kweMetriki kwiBlogging Business | Martech Zone
NgoMvulo, nge-11 kaJanuwari, 2010 NgoMvulo, Meyi 16, 2022 Douglas Karr
Baninzi kwihlabathi losasazo lwentlalo eligwebe impumelelo yeblogi ngokwendlela yokuzibandakanya ezinje ngezimvo. Andiyi. Akukho kunxibelelana phakathi kwempumelelo yebhlog kunye nenani lamagqabaza kuyo. Ndiyakholelwa ukuba amagqabantshintshi anokuchaphazela ibhlog- kodwa ngenxa yokuba ayisiyiyo into onokuyilawula ngokuthe ngqo andiyihoyi.
Ukuba bendifuna amagqabantshintshi, bendiza kubhala iintloko-ndaba ezidibanisa ikhonkco, umxholo ophikisanayo, kunye nezithuba zebhlog ezihlekisayo. Oku, kuya kuphulukana nabaphulaphuli bam abaphambili kwaye kujolise kubantu abangalunganga.
Iindlela ezintathu zokuguqula ukubhloga kwishishini ndibeka ingqalelo:
Iziphumo zeNjini yokukhangela ukuGuqulwa -Iingcali ezininzi zigxile kubungakanani be-injini yokukhangela owufumeneyo… kodwa hayi ukuba uphulukene netrafikhi engakanani. Ukuba ubhala izihloko zeposti kwaye idatha yakho yemeta ayinyanzelisi, unokwenza inqanaba eliphezulu leenjini zokukhangela kodwa abantu banokungacofa ikhonkco lakho. Bhala izihloko zeposi eziguqula i-traffic kwaye uqinisekise ukuba iinkcazo zakho zemeta zigcwele amagama angundoqo kunye nesizathu esikhulu sokucofa! Sebenzisa iGoogle Search Console ukuhlalutya ezi ziphumo.
Ukufowuna kwiNtshukumo yeeNguqulelo-Iindwendwe zokuqala zifika kwibhlog yakho kwaye nokuba ziyahamba okanye zijonge ukwenza ishishini nawe. Ngaba ubonelela ngendlela yokuba banxibelelane nenkampani yakho? Ngaba unayo ifom yoqhagamshelwano ebalaseleyo kunye nekhonkco? Ngaba idilesi yakho kunye nenombolo yefowuni ichongiwe ngokucacileyo? Ngaba uneeFowuni ezinyanzelisayo zokuSebenza ukuba iindwendwe zicofa?
Ukuguqula iphepha ukuguqula -Emva kokuba iindwendwe zakho zinqakraza kwiFowuni yakho ukuba isebenze, ngaba zihlala kwiphepha elibenza baguquke? Ngu liphepha elicocekileyo nelicocekileyo ngokuhamba ngokungafunekiyo, amakhonkco, kunye nomnye umxholo leyo ayiqhubi ukuthengisa?
Amathuba akho kufuneka aguquke kwinqanaba ngalinye lendlela ukuze uwafumane njengomthengi. Kufuneka utsale ukucofa kwabo kwiphepha leziphumo ze-injini yokukhangela (i-SERP), kufuneka ubanike umxholo ofanelekileyo ukuze bafumane ithemba labo kwaye ubanyanzele ukuba bembe nzulu, kwaye kufuneka ubanikeze indlela yokubandakanya - njengokufowunela okunyanzeliswayo kwisenzo ( CTA) kwaye kufuneka ubabonelele ngeendlela zokuqhagamshelana nawe - njengephepha lokufikela eliyilwe kakuhle, elilungiselelweyo.
Isihlomelo Iphumeze kwezi ndlela ziBalaseleyo!
Ekuqaleni: Iziphumo zenjini yokukhangela Kubalwa ukubhloga kweShishini kwi-ROI, Isingeniso sinendawo yesibini kwaye sibhalwe kakuhle-ngokuqinisekileyo ukutsala itrafikhi ethile!
Qaphela: Uyakuqaphela ukuba iCompendium inesiphumo sesibini sokukhangela hayi esokuqala. Ukuba isihloko sephepha sineCompendium Blogware ekupheleni kwesihloko kunesiqalo, umhla, kunye nolwazi lombhali luye lwawiswa, kwaye inkcazo yemeta yayinolwimi olunyanzelisayo ngakumbi, banokude bakwazi ukucudisa iziphumo zomgangatho ophezulu. (Kuyinto enkulu ukuba inkcazo yemeta iqala ngegama elingundoqo, nangona!) Olo tshintsho lunokuphinda kabini okanye kathathu ukuguqulwa kwabo kweli phepha leziphumo zenjini yokukhangela.
Okwesibini: Sisithuba esihle esifutshane esikhokelela ingqalelo kwizibonelelo ezibini ezongezelelweyo ukubala iReturn On Investment. Esi sisithuba esiqinileyo, esifanelekileyo, nangona kunjalo!
Qaphela: Enye indlela yokuphucula oku inokuba kukubonelela ngesixhobo sesithathu - olona bizo lwesenzo kwi-ROI Toolkit.
Okwesithathu: Ukubizelwa kwisenzo kuhle kakhulu kwaye kuhambelana nekopi ekwiphepha, kwaye yindlela ecacileyo yokufumana ulwazi olongezelelweyo!
Okwesine: Iphepha lokufikela alinasiphako ngokupheleleyo - libonelela ngomxholo oxhasayo, onyanzelisayo, ifom emfutshane yokuqokelela ulwazi loqhagamshelwano lweqela leentengiso, kunye nemibuzo efunekayo ukuze ufumane imvakalelo yohlahlo lwabiwo-mali olulindelekileyo kunye nemvo yongxamiseko.
Iqela lentengiso kwiCompendium liyamangalisa ekusebenziseni ngokupheleleyo isixhobo sabo. Ndiyazi inyani ukuba i-Compendium iqokelela ngakumbi ukukhokelela kwiziphumo zokukhangela kunye nebhlog yabo kunawo nawuphi na omnye umthombo. Ngaphandle kwamathandabuzo kungenxa yomsebenzi omangalisayo abawenzayo kuvavanyo, ukuphinda baphinde basebenzise indlela yabo yokuguqula. Wenze kakuhle!
Ukuchaza Okugcweleyo… Ndinezabelo kwaye ndincedise ekuqaliseni iCompendium (enkosi kuba bengahambanga nayo logo yam!)
tags: ukubhloga kwishishiniIinguqulelo zokuguqulakubloga kwequmrhu